Yariisow oo ka hadlay sababaha ay u xernaayeen wadooyinka Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Muqdisho-Hornafrik-Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo goordhaw Warbaahinta kula hadlay Aqalka Dowladda Hoose ayaa ka hadlay Sababihii loo xiray Wadooyinka Muqdisho.
Yariisow waxa uu sheegay in Hay’adaha Amniga uu kala hadlay Cabasho dadweyne oo kasoo gaartay Xirnaashiyaha Wadooyinka Caasimadda, uuna la wadaagay Saraakiisha Ammaanka.
Waxa uu sheegay in ay Hay’adaha amniga ay u sheegeen in ujeedka ay u xireen wadooyinka uu ahaa, sidii ay ugu soo kaban lahaayeen dhibaatooyinkii ay ka dhaxleen Weerarkii ka dhacay Muqdisho.
Hay’adaha Amniga ayuu sheegay Duqa Muqdisho in kulan gaar ah uu la qaatay, isagoona tibaaxay in uu kala hadlay, una sheegeen in ujeedka ugu weyn ee wadooyinka loo xiray ay aheyd badbaadinta shacabka.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa warbaahinta la wadaagay intii ay xirnaayeen Wadooyinka Muqdisho in Ciidamada Ammaanka ay kahor tageen Qaraxyo, gacanta ay ku dhigeen, inkastoo uusan sheegin halka lagu qabtay iyo Xiliga la qabtayba.
Hay’adaha Ammaanka ayuu sheegay in ay ka codsadeen in shacabka uu ugu dalbo in ay kala shaqeeyaan xaqiijinta amniga iyo wargelinta shaqsiyaadka ku howlan qaraxyada sida uu hadalka u dhigay.
Ciidamada Ammaanka Ayaa Maalmihii lasoo dhaafay xiray Isgoysyada looga soo gudbo Wadada Makka Al-Mukarrama kolka la joogo Wadada Wadnaha, waxa ayna saameynta ugu badan ku yeelatay qeybaha kala duwan ee Bulshada.
Al-shabaab oo la sheegayo in ay ku dhuumaaleysanayaan Balcad.